Vonona ny handeha amin'ny Cruise eropeana tsy misy fiaramanidina?
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Vonona ny handeha amin'ny Cruise eropeana tsy misy fiaramanidina?
Alemana miaraka amin'izao tontolo izao dia mandalo fijanonana tanteraka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ity fotoana ity dia manome mpandraharaha mpizahatany mpamorona mba hieritreritra ny fomba hamerenany indray ny orinasa aorian'ny krizy. Commundus Reisen any Duesseldorf, Alemana dia nanondro ny fitambarana mety, lamasinina sy fitsangantsanganana an-tsambo tamin'ny Aogositra 2020
Na izany aza, ny fitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina dia mety mbola fanamby amin'ny volana aogositra, fa ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ny fahatongavana amin'ny lalamby dia mety ho fironana vaovao sy zava-baovao ho an'ireo mpizahatany alemanina aorian'ny COVID-19
Fitsangantsanganana manokana miaraka amin'i MS Amera avy any Lisbonna mankany Bremerhaven any Alemana dia natolotry ny Comundus Reisen, orinasam-pitaterana monina ao Duesseldorf. Ny mpandeha dia hiakatra amin'ny sambo fitsangantsanganana any Lisbonne aorian'ny dian-dalamby mahafinaritra avy any Alemana miaraka amin'ny alina any Paris ao amin'ny Holiday Inn Paris Gare Montparnasse kintana 4, ao anatin'izany ny sakafo hariva frantsay. Alina faharoa dia kasaina hatao ao Bilbao ao amin'ny Hotel Barcelo Nervion kintana 4 akaikin'ny tranombakoka Guggenheim. Fitsidihana an'i San Sebastian sy Pamplona no ao anaty fandaharam-potoana.
Aorian'ny fahatongavany ao an-drenivohitra Portiogey, ny mpandeha an'i Lisbon dia hiakatra avy eo amin'ny MS Amara. Ny fitsangantsanganana dia ahitana fijanonana ao Santiago de Compostela, Bordeaux miaraka amin'i Saint Emilion, Stonehenge, London na Amsterdam. Avy any Amsterdam, dia mitaingina lamasinina miverina miverina mankany Bremerhaven no hamarana ny dia, ara-potoana handraisana anjara amin'ny karnaval "Sail".
Lahatsary fanadihadiana alemà "Crazy for the Ocean" dia mety horonantsary horonantsary amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina ka ahafahanao manana kintana sarimihetsika. kitiho eto Raha mila fanazavana fanampiny momba ity dia fitsangantsanganana an-dalamby miavaka ity ary isao ny andro hanohizan'ny dia rehefa avy nampatahotra anao ny fahasalamana. Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny dia hafa tsy misy fiaramanidina dia hita ao amin'ny www.bahn-erlebnisreise.de
Ny fandraràna ny fivezivezena India izao dia misy ny tompon'ny pasipaoro India noho ny coronavirus COVID-19
Sierra Leone dia nandefa mpizahatany japoney 4 ho an'ny Coronavirus